Jun 24,2018 view 789
Jun 24,2018 view 1306
Jun 24,2018 view 833
Jun 24,2018 view 737
ချမ်းသာချင်သူတွေအတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်း (၁၀) ချက်
ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်းတာလေးတွက ကိုယ့်ရဲ့ ချမ်းသာခြင်းကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ကို သိပါရဲ့လား …. ? သိသာထင်ရှားတာက နေ့စဉ်အလေ့အကျင့် အချို့က ကိုယ့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီးတော့ မဝေးလှတဲ့ အနာဂတ်ကာလမှာ ချမ်းသာလာမဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း တိုးမြင့်စေပါတယ် ။ ဒီ ချမ်းသာစေမယ့် အလေ့ အကျင့်တွေက ကိုယ့်အတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ဖြစ်စေသလို အဲဒီအချက်တွေက ချမ်းသာပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရဖို့အတွက် တကယ့်ကို ကူညီပေးပါတယ် … ။
အဲဒါတွေက အများကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး … (၁၀) ချက်တည်းပါ … နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သေသေချာချာ လုပ်ဖို့တော့ လိုပါတယ် … ။
၁။ နေ့စဉ် ရည်မှန်းချက်တွေကို သတ်မှတ်ပါ
ရေရှည်လုပ်ကိုင်ရမယ့် ရည်မှန်ချက်တွေနဲ့တင် မလုံလောက်ပါဘူး … ကိုယ့်ရဲ့ နေစဉ်ရည်မှန်းချက်တွေကို သတ်မှတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် …. ။ နေ့စဉ် တစ်နေ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အခါ ကိုယ်တစ်နေကုန် ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီး တော့ ဘယ်လောက် ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ အရာတွေ ပြီးမြောက်လဲ ဆိုတာကို ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ ထို့အတူပဲ ကိုယ့်ဘဝအတွက် … ကိုယ်အခွင့်အလမ်းတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့လဲ … ဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားပြီး နောက်တစ်နေ့ အတွက် ရည်မှန်းချက်ကိုလည်း သတ်မှတ်ပါ …. ။
၂။ တက်တက်ကြွကြွ နားထောင်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါ
တက်တက်ကြွကြွ နဲ့ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်တတ်တာကလည်း ဘယ်နယ်ပယ်မှာ မဆို ကိုယ့်ဆီက သူများတွေ ဘာတွေ လိုအပ် လဲ ကိုယ်အတွက် ဘာတွေ အကျိုးရှိမလဲ ဆိုတာကို နားလည်ဖို့အတွက် ကူညီ ပေးနိုင်တဲ့ မရှိမဖြစ် စွမ်းရည် တစ်ခုပါ … ။ ဥပမာ - ကိုယ်က ခုမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုကို စတင်တည်ထောင်တယ် ဆိုရင် နည်းနည်းပြောပြီး များများ နားထောင်တာကလည်း အောင်မြင်ရေး အတွက် သော့ချက် တစ်ခုပါ ။ အများပြောတာကို နားထော်တတ်တဲ့ စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကူညီနိုင်သလို ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သင်ယူနိုင်ပါတယ် … ။
၃။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ
ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း နဲ့ အဟာရ မျှတအောင် စားသုံးချင်းကလည်း အောင်မြင်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးပါတယ် … ။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မယ် ဆိုရင် နေ့စဉ်လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေကို ပိုပြီးတော့ တက်တက်ကြွကြွ မြန်မြန်ဆန်ဆန် နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လာနိုင်ပါ လိမ့်မယ် … ။
၄။ အများနဲ့ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်ပါ
စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းရဲ့ စွမ်းအားကို လျှော့မတွက်လိုက်ပါနဲ့ … ၊ အများနဲ့ဆက်ဆံပြီး လိုအပ်တဲ့ အကူအညီများ ပေးခြင်းဟာလည်း အောင်မြင်မှု နဲ့ ချမ်းသာရေးအတွက် ရှေ့ပြေးနမိတ်တွေပါပဲ … ။ လိုအပ်သလို လူအများရှေ့မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အကူအညီများ ပေးနိုင်အောင် လုပ်ပေးပါ … ဒါကလည်း ကိုယ့်အတွက် လူအများက သတိထားမိနိုင်သလို အဆက်အသွယ်ကောင်းများ လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ် … ။
အောင်မြင်နေတဲ့ လူတွေ အများစု တစ်နေ့ကို တစ်နာရီထက် ပိုပြီး တီဗွီကို မကြည့်ကြပါဘူး .. ။ တစ်ချို့ချို့ဆိုရင် လုံးဝ မကြည့်ကြပါဘူး … ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တီဗွီရှေ့မှာ အချိန်ဖြုန်းမဲ့ အစား အခြား အကျိုးရှိတဲ့ အလုပ်တစ်ခုခု ကို လုပ်နေကြလို့ပါပဲ … ။ (ဆိုလိုချင်တာက ကိုယ့်အတွက် ဘာမှ အကျိုးမရှိတဲ့ တီဗွီအစီအစဉ်တွေကို အချိန်ပေးပြီး ကြည့်မနေသင့်တာကို ပြောတာပါ … ကိုယ့်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတရာ … စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး ၊ ဘာသာရေး ၊ နည်းပညာ … အစရှိသဖြင့် … ဗဟုသုတ … နည်းနာ တစ်စုံတရာ ရနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်မျိုးဆိုရင်တော့ ကြည့်သင့်ပါတယ် …. ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖြည့်စွက် အမြင်ပါ)
၆။ နေ့တိုင်း စာဖတ်ပါ
စာဖတ်ခြင်းက ကိုယ့်ကို တိုးတက်စေပါတယ် … အသိပညာဗဟုသုတ၊ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား စတာတွေကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေပြီး အကောင်း အဆိုး၊ အကြောင်းအကျိုးကို ခွဲခြား သိမြင်နိုင်စေပါတယ် … ။ ကိုယ်ကြိုက် နှစ်သစ်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရှာဖွေပြီးတော့ နေ့စဉ် နာရီဝက်လောက် ဖတ်ပေးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ သက်မွေး ဝမ်းကြောင်း နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေကို ဝယ်ယူပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းရည်တွေ တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်သလို ကမ္ဘာကြီး နဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ဖို့အတွက် လည်း အင်တာနက် ဝက်ဆိုက် တွေမှာ နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။
၇။ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို တိုးတက်ပါစေ
ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက် အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို ပိုပြီတော့ ကောင်မွန် ပြည့်စုံချင်တယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ သက်မွေးဝမ်ကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ ပိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ရမှာ ဖြစ်သလို … ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လစာရရှိဖို့ … အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အစွမ်းအစကို ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် အသုံးပြုပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုတိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ တရားမျှတမှုနဲ့ အနိုင်ရနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ် … ။
၈။ အကောင်းဖက်က တွေးပါ
အကောင်းမြင်ခြင်းဟာ အလေ့အကျင့်တစ်ခုလောက် သာ မကပါဘူး ဘဝရဲ့နည်းလမ်း တစ်ခုပါ။ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကြည့်တတ်တဲ့ အတွေးတွေနဲ့ အဆိုးမြင်အတွေကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ ဆိုတာကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် အရာရာကို အကောင်းမြင်ဖို့အတွက် ပိုပြီးတော့ လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။ အခွင့်အလမ်း အသစ်တွေ အတွက် ရင်းနှီးပွင့်လင်းပြီး စိတ်အားထက်သန်နေပါစေ … ။
ငွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ လေ့လာသင်ယူပါ .. ငွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းဟာ ချမ်းသာဖို့အတွက် တကယ်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ် … ။ ကိုယ့်ရဲ့ အသုံးစရိတ်ကို ထိန်းသိမ်းပြီး နေ့စဉ်ဝင်ငွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း တစ်ချို့ကို စုဆောင်းနိုင်မယ် ဆိုရင် အဲဒီလို စတင်ကျင့်သုံးတဲ့ အချိန်ကစပြီးတော့ ချမ်းသာလာဖို့ အတွက် ပိုပြီးတော့ စုဆောင်းလာနိုင်ဖို့အတွက် အာမခံချက် ရှိပါတယ် … ။
၁၀။ ကိုယ်နဲ့ အတွေးအကြံ အယူအဆတူသူများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါ
ကိုယ့်နဲ့ အတွေးအကြံ အယူအဆတူသူများနဲ ပေါင်းသင်းခြင်းက အောင်မြင်ရေးအတွက် အယူအဆ အတွေးအမြင်တွေကို ဖလှယ်နိုင်ရုံသာမက ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရောက်ရှိပြီး အောင်မြင်နိုင်ဖို့ အတွက်လည်း အကူအညီရစေပါတယ် … ။ ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံရမှာ ဖြစ်သလို ကိုယ့်ရဲ့ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလည်း ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်ဖို့ အတွက် အစီအစဉ်ချမှတ်တာတွေ စီမံခန့်ခွဲ တာတွေ ပြုလုပ်ရပါမယ်။
ဒီအလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရရှိစေရုံသာမက ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခရီးကိုပါ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်မှာပါ ။ ဒီအလေ့အကျင့်ကေင်း (၁၀) ချက်ကို နေ့စဉ် အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင့်သုံးနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ ။